Tacsi Abwaan Maxamuud Cabdullahi Ciise Sangub. | Goobsan Media Inc.
Home Xulashada Tacsi Abwaan Maxamuud Cabdullahi Ciise Sangub.
Tacsi Abwaan Maxamuud Cabdullahi Ciise Sangub.
Alle ha u naxariistee waxaa maanta cisbitaal kuyaal magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ku geeriyooday abwaankii waynaa ee Maxamuud Cabdilaahi Ciise oo ku magac dheeraa ‘SANGUB’.
Abwaanka ayaa waayadii dambe la daalaa dhacayey xanuunka macaanka iyo dhaawac la sheegay in uu lugta ka soo gaaray mar uu ku sugnaa Sacuudiga oo uu Cumro u aaday.
Abwaan Singub ayaa sannadkii 1943-dii ku dhashay magaalada Dhagaxbuur ee gobolka Jarar ee dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya.
Waxa uu fanka kusoo biiray asagoo da’yar , waxa uuna ku bilaabay ciyaarta dhaantada oo uu aad ugu soo caan baxay.
Riwaadaha sida wayn loogu xasuusto waxaa ka mid ahaa: Waa Maadays Adduunyadu Dadkuna waa Matalayaan, Qabrigii Jacaylka, Xuskii Jacaylka , Xuudbaa liqay Jacaylka, iyo Qabyo oo uu sameeyey burburkii kaddib.
Abwaan Singub waxa uu ka mid ahaa hal abuuradii ugu caansanaa ee taariikhda fanka Soomaaliyeed soo mara, waxa uu sanadihii ugu danbeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho, oo uu ka sameeyay koox la yiraahdo Deegaan kuwaas oo masraxyada la isugu yimaado ka dhiga heeso iyo riwaayado dhamaantood ka tarjumaya in dib loo dhiso Soomaaliya lagana gudbo kala qaybsanaanta.
Abwaan Singub ayaa burburkii kaddib ku noolaa dalka Jabuuti oo uu kusoo dhaweeyey madaxweyne Cismaaciil Cumar Geelle, asagoo waayadii dambena u wareegay magaalada Muqdisho.
Ugu danbayntii hadaan nahay Bahda Goobsan Media Inc. waxaan tacsi u diraynaa ehelka ,qoyskii iyo caruurtii uu ka geeriyooday Abwaanka Samir Iyo Iimaan Allaha ka siiyo , Aamiin Aamiin.